၇၆။ Older / Newer Post ကို ပုံနှင့်အ စားထိုးနည်း ~ မောင်သက်ဝေ
၇၆။ Older / Newer Post ကို ပုံနှင့်အ စားထိုးနည်း
Thursday, November 10, 2011 Admin No comments
1. Layout မှ Edit Html ကို click လိုက်ပါ။
2. Expand Widgets ကို အမှန်ခြစ်ပေးလိုက်ပါ click လိုက်ပါ။
3. Newer Post ကို ပုံနှင့် အစားထိုးဖို့အတွက် အောက်က code ကို ရှာလိုက်ပါ။
အထပ်ပါ အတိုင်းတွေ့ရတဲ့ code ကို delete ပေးပြီ အဲ့ဒီနေရာမှာ အောက်က code နဲ့ အစားသွင်လိုက်ပါ။
4. Older Post အတွက် အစားထိုးဖို့အတွက် အောက်က code ကို ရှာလိုက်ပါ။
အထပ်ပါအတိုင်းတွေ့ရတဲ့ code ကို delete ပေးပြီ အောက်က code နဲ့ အစားသွင်းလိုက်ပါ။
5. Home အတွက် ပုံနှင့် အစားထိုးဖို့အတွက် အောက်မှာတွေ့ရတဲ့ code ကို ရှာလိုက်ပါ။
အထပ်ပါ code ကို delete ပေးပြီအောက်က code တွေနဲ့ အစားသွင်လိုက်ပါ။